သင်၏ Mac တွင်မည်သည့် Bluetooth ဗားရှင်းကိုသိရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
ယရှေု Arjona Montalvo | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 04/09/2019 13:00 | Mac ကွန်ပျူတာများ, လဲ tutorial, အတော်ကြာ
ကိရိယာအသစ်များစတင်ခြင်းနှင့်အတူ Magic Mouse 2၊ Magic Trackpad2နှင့် Magic Keyboardအချို့သူများကသင်၏ Mac သည်ဒီအရံပစ္စည်းအသစ်များကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလားဟုစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ Apple ထုတ်ကုန်အသစ်အားလုံးဟာကြိုးမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးပေါ် Bluetooth ဗားရှင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါသင်၏ Mac သည် ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီယင်းတို့ကိုပံ့ပိုးပေးမလားဆိုတာသိရန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏ Mac သည်မည်သည့် Bluetooth ဗားရှင်းကိုရှာဖွေရန် Apple သည်မလွယ်ကူသော်လည်းလွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီ post မှာတော့မင်းကိုပြမယ် သင်၏ Bluetooth ဗားရှင်းကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းနှစ်မျိုး သင်၏ Mac မှအဆင့်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
အဆင့် 1: the ကိုနှိပ်ပါ Apple menu (ပန်းသီးသင်္ကေတ) → ဒီ Mac အကြောင်း → စနစ်အစီရင်ခံစာ
အဆင့် 2: ပေါ်ထွက်လာသောတြိဂံကိုနှိပ်ပါ hardwareရွေးချယ်ပါ ဘလူးတုသ်.
အဆင့် 3: Hardware ထဲမှာ version ကိုရှာပါ LMP အဲဒါကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုဖော်ပြတယ်၊ ဒါကဗားရှင်းဖြစ်တယ်၊ အခုငါဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုငါပြလိုက်တယ်။
ယခုတွင်သင့်တွင် LMP ဗားရှင်းဖြစ်သော '' Link Manager '' parameter ကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုပါက၊ တရားဝင် Bluetooth သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညွှန်းကိုဖြတ်ကူးရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ ၎င်းသည်တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ဗားရှင်းအဘို့ Bluetooth 4.0 = 6။ ထို့ကြောင့် 0x6 ၏ LMP ဗားရှင်းသည် Bluetooth 4.0 ၏အဓိကဖော်ပြချက်နှင့်အတူ Bluetooth ချစ်ပ်ကိုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် LMP ဗားရှင်း 0x6 ကိုတွေ့လျှင်သင့်တွင်ဗားရှင်း ၄.၀ ရှိသည်။ ကျွန်တော့် Mac Mini မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ 0x4 ငါ့ဗားရှင်းဆိုလိုသည် 'Bluetooth Core Specification 2.1 + EDR'.
LMP စနစ်ကိုစနစ်တကျအစီရင်ခံရန်မလိုပဲတိုက်ရိုက်သိရန် ဂိတ် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
system_profiler -detailLevel အပြည့်အဝ SPBluetoothDataType
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ Mac ၌မည်သည့် Bluetooth ဗားရှင်းကိုသိရှိနိုင်မည်နည်း
ဂျော့ဘ်ရုပ်ရှင်အသစ်၊ iMac Retina အသစ်၊ iWork update နှင့်အခြားအရာများ။ ငါ Mac ကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး